‘कि लास चाहियो कि सास चाहियो शसस्त्र द्धन्द्धमा बेपत्ता पारिएका परिवारको माग – Newsrara
‘कि लास चाहियो कि सास चाहियो शसस्त्र द्धन्द्धमा बेपत्ता पारिएका परिवारको माग
न्यूज रारा November 27, 2020
कालीकोटः मुलुकमा चलेको १० वर्षे द्वन्द्वले धेरैका परिवार गुमे, कतिका परिवार अहिले पनि बेपत्ता छन्, धेरैले अंगभंग हुनपर्यो । द्वन्द्वका कारण राज्यले व्यहोरेको भौतिक क्षति पनि कम छैन ।
शान्ति सम्झौता भई द्वन्द्व समाधान भएको पनि १४ वर्ष वितिसक्यो । तर, द्वन्द्वका कारण राज्य वा विद्रोही पक्षबाट अन्यायमा परेकाहरूले भने अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । द्वन्द्वका कारण बेपत्ता भएकाका परिवार आफन्त आउलान् भन्ने आशमा रहेका छन् । आफन्तको खोजीमा कहिले समाजिक संस्था त कहिले मानवअधिकारका लागि सञ्चालित संस्थामा गुहार माग्न परिवार पुग्ने गरेका छन् । तर, उनीहरूले आफन्तको अवस्था थाहा पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वका कारण पति बेपत्ता भएका सान्निवित्रेणी गाउँपालिका–६ कि सुपारी लुहार भन्छिन्, ‘१८ वर्ष भयो, कुनै अत्तोपत्तो छैन, न लास छ, न सास छ । ’
उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले आयोजना गरेको पीडित पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण सम्बन्धमा कालीकोटमा आयोजना गरिएको अन्तरिक्रया कार्यक्रममा यस्तो गुनासो गरेकी हुन् । आफ्नो बुवा वेपत्ता भएको बर्षौ वित्दा पनि अहिलेसम्म जीवित छन् वा मृत फेला पर्न नसकेको खाडाचक्र नगरपालिका–२ का नरेन्द्र बोगटीले बताए । ‘म सानो थिए अनुहार अलि अलि सम्झन्छु, अहिले पनि सेना, पुलिस देख्दा डर लाग्छ, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री बेपत्ता परिवारका आफन्तलाई जागिर दिने आश्वासन मात्र बाढ्छन्, कसरी जीविकोपार्जन गर्ने गार्हो भएको छ ।’ बोगटीले भने, ‘न पार्टी न राज्य कसैले हेरेको छैन ।’
बोगटीकै जस्तो पीडा अहिले वडा सरकार चलाईरहेका जिल्लाको सान्निवित्रेणी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष रंगराज सार्कीको पनि छ । सरकारले दिने भनिएको राहत अहिलेसम्म दिइएको छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको व्यवस्था केही छैन भावविह्वल भएर उनले सुनाए । सार्कीका २ भाईलाई राज्यद्धारा बेपत्ता पारिएको थियो अहिले सम्म पत्ता लागेको छैन । कालीकोटका धेरै व्यक्तिले सशस्त्र द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका छन् । द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्ति अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्त अझै पनि आफ्ना मान्छेहरू आउने आशमा छन् तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पर्कमा नआउँदा उनीहरूको पीडा झन बल्झिएको हो । युद्धका बेलामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारमा आफन्त आउने आश अझै नमरेको अधिवक्ता हिक्मत बहादुर विष्टले बताए । हराए, मारिए वा जिउँदै छन्, पत्ता नलाग्नु ठूलो पीडा भएको उनको भनाई थियो । राज्यले विभिन्न समयमा आयोग गठन गरेको भएपनि आयोगले पीडितको घाउमा मलहम लगाउनुको साटो उल्टै घाउ बल्झाउने काम गरेको उनको आरोप छ । राज्यले गठन गरेका आयोगले गर्ने खर्चमात्र द्धन्द्धपीडितलाई दिने हो भने पनि राहत पाएको महसुष द्धन्द्धपीडितले गर्न पाउने उनको भनाई थियो ।
कुनै पनि बहनामा कसैको परिवार हराउनु सामान्य कुरा होइन । तर, राज्य वा तत्कालीन बिद्रोहीका तर्फबाट बेपत्ता भएका जो भए पनि उनीहरूको अवस्था परिवारले थाहा पाउनुपर्छ । राजनीतिक समस्या समाधान भयो उनीहरूको समस्या कहिले सुल्झन्छ ? पीडितहरूका आवाज कहिले सम्बोधन हुन्छन् ? खाडाचक्र नगरपालिका–११ का रुद्धे तिरुवाले प्रश्न गरे । उनले भने २०५८ सालमा माओवादीको कमाण्डर भनेर कान्छो भाईलाई बेपत्ता पारियो र जेठो दाजुलाई रेगिंलको पुलमा मारियो । बेपत्ताको अहिलेसम्म पनि न लास आयो न सास आयो ।
बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारमा विचल्ली छ । कमाउने छोरा मारिएको छ, अहिले आफ्नो विचल्ली भएको खाडाचक्र नगरपालिका–२ का कलबहादुर बोगटीले बताए । उनले आफ्नो छोरा निर्मल बोगटी बेपत्ता भएको बर्षौ वित्दा पनि राज्यले आफ्नो संरक्षण नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । द्धन्द्वका कारण बेपत्ता भएका र अन्यायमा परेकाका लागि न्याय दिन विस्तृत शान्तिप्रक्रियासँगै सरकारले आयोग बनायो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो, धेरै प्रतिवेदन बने, आयोगका नाममा धेरैले रोजगारी पाए । तर, पीडितले भने न्याय पाउन नसकेको कालीकोटका राजनीतिक दलका नेताहरुले बताए ।
द्धन्द्धको बेला कुनै पनि प्रकारले बेपत्ता परेकाको राज्यले खोजिगर्नुपर्ने कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरुले बताएका थिए । कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले राज्य परिवर्तनमा बेपत्ता भएकाको योगदान रहेको बताए । उनले, आयोगले न्याय दिनका लागि विभिन्न जिल्लाका पीडितहरुसंग अन्तरक्रिया गर्दै आएकाले अव पीडितलाई छिट्टै न्याय दिने प्रतिवद्धता गरे ।